थाहा खबर: पहिरोले बिर्घामा एक घर पुरियो, जोखिममा दुई घर
पहिरोले बिर्घामा एक घर पुरियो, जोखिममा दुई घर
पाल्पा : स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका–४ बिर्घास्थित गौतमटोलमा पहिरोले एक घर पुरिएको छ। दुई घर जोखिममा रहेका छन्।
स्थानीय दीपक नेपालीको पसल रहेको घर पुरिएको हो। चार दिनदेखि परेको अविरल वर्षासँगै माथिबाट झरेको पहिरोले घर पुरिएको बिर्घा प्रहरी चौकीका प्रमुख प्रहरी सहायक निरीक्षक रिखाईप्रसाद चौधरीले बताए। पहिरो झर्ने खतरा भएपछि पसलबाट सबै सामग्री यसअघि नै निकालिएको थियो। सानो टिनको छाप्रो पुरिएको उनले बताए। मानवीय क्षति भने भएको छैन्। समयमै सचेतना अपनाएका कारण अन्य क्षतिसमेत बढी हुन पाएन।
पहिरोले सोही ठाउँका प्रेम नेपालीको घर उच्च जोखिममा परेको छ। निर्माणाधीन पक्की घर पहिरोले बगाउने अवस्थामा रहेको चौधरीले बताए। अझै केही समय वर्षा भइरहे पहिरोले उक्त घर बगाउने खतरा छ। अहिले त्रिपाल टाँगेर जोखिम रोक्ने प्रयास भइरहेको छ। गत वर्ष पनि नेपालीको घर पहिरोले पुरिएको थियो। उनीसँगै छिमेकीको घर पहिरोले पुरिंदा १ जनाको मृत्यु भएको थियो। २ घर विस्थापित भएका थिए।
यस्तै सोही ठाउँका कपिल नेपालीको घर पनि पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ। उनका परिवार विस्थापित भएका छन्। उनका परिवारलाई छिमेकीको घरमा राखिएको प्रसनि चौधरीले बताए। माथिबाट पहिरो झरेकाले घर पुरिन सक्ने खतरा रहेको छ। उनका अनुसार अन्य घरसमेत जोखिममा रहेकाले सचेत रहन भनिएको छ।
वन्यजन्तुमैत्री संरचना निर्माणमा जोड दिँदै शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज
आमा र दुई छोरीको हत्या गर्ने पूर्णबहादुरलाई आजीवन कैद
ऐयासी जीवनशैलीले अपराध, साथीबाटै हत्या
पुलमाथिबाट बग्‍यो सोलुखोला, सामाजिक सञ्जालमा दोहोरी! वास्तविकता के हो?
३३ किलो सुन काण्डमा फरार भोजराज पक्राउ
खोपसहित होटेलबाट बिर्तामोडका स्वास्थ्य कर्मचारी पक्राउ
झापामा ६ जुवाडे नगदसहित पक्राउ
तल्लो तहका प्रहरीका लागि लाभदायक हुने प्रहरी नियमावली २०७१ संशोधनको प्रस्ताव अन्तिम चरणमा
मेक्सिकोलाई हराउँदै अमेरिकाले जित्यो कन्काकाफको उपाधि
बागलुङमा बस दुर्घटना, ११ जना घाइते
पहिरोले हेटौंडा-काठमाडौं सडक अवरुद्ध